Tahriibayaal Somali iyo kuwa Afrikaan ah oo lagu Qabtay Xuduudka Maraykanka iyo Mexico – Radio Daljir
Maajo 14, 2015 9:40 b 0
Khamiis, May 14, 2015 (Daljir) — Tahriibayaal Somali iyo kuwo kale oo ka soo jeeda dalal Afrikaan ah ayaa lagu qabtay meel u dhow Degmadda Victorville ee Gobalka California ee dalka Maraykanka.
Shabakadda Wararka ee OpenYourEyesPeople.com ayaa soo bandhigay Video muujinaya Bas ay leeyihiin Waaxda Ammaanka Gudaha Maraykanka oo bishan May ahayd 7-da taagnaa Kaalin Shidaal, isla markaana ay Baskaasi ka buuxeen Qaxooti Somali iyo kuwo kale oo Afrikaan ah.
Baskaasi oo ah nooca Safarka oo laga leeyahay Waaxda Ammaanka gudaha ee Maraykanka(DHS)ayaa waxaa si cad uga muuqday Calaamadda ama Loogadda DHS.
Tiradda Guud ee Soomaalida ku nool dalka Maraykanka ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan 100,000 oo qof, oo badankooda ku nool Goballadda Minnesota, Ohio iyoPhiladelphia.
Dowladda Iran oo ka hadashay Dooni looga Afduubtay xeebaha Soomaaliya